FAQ - Chengdu Baishixing Science and Technology Industry Co., Ltd.
Amino asidra sy ny derivatives
Asidra amino voaaro
Vitamina & hafa
F: Orinasa mpivarotra na mpanamboatra ve ianao?
A: Izahay dia mpanamboatra ny vokatra rehetra voatanisa eto.
F: Afaka manafatra ireo asidra amino tsy voatanisa amin'ny net ve isika?
A: ENY, manolotra serivisy synthesize mpanjifa izahay araka ny fepetra takinao.
F: Hafiriana ny fotoana fanaterana anao?
A: Ny fotoana fandefasana dia amin'ny ankapobeny 7 ~ 15 andro rehefa mahazo baiko ofisialy.
F: Manome santionany ve ianao?Maimaimpoana ve sa fanampiny?
A: Manolotra santionany maimaim-poana izahay.
A: Ny entana tsirairay dia tsy maintsy sedraina ary mahazo ny fankatoavan'ny QA, ary manana fanamarinana amin'ny alàlan'ny QC izahay mba hanaraha-maso ny kalitao.
F: Inona ny fonosanao?
A: Ny fonosana mahazatra anay dia 25kg / barika, ao anatiny dia misy kitapo PE trasparent roa.
F: Ahoana no ahafantarako ny satan'ny fandefasana aorian'ny fandoavana?
A: Ny antsipirian'ny fandefasana dia misy ny fonosana, ny fanaraha-maso no.ary ny fampidirana sary, ny antontan-taratasy fandefasana dia havaozina amin'ny alàlan'ny E-mail.
No.217, North of Industry Road, Heshan Town, Pujiang County, Chengdu, Sichuan, Sina.
Araka ny filanao, amboary ho anao, ary manome anao vokatra sarobidy kokoa.
L-Leucine, Pharmaceutical Chemical, L-Glutamine vovoka, Acetyl-L-Leucine, Dl-Pyroglutamic asidra, 537-55-3,